February 24, 2021 – Healthy Life Journal
ဘယ်နဲ့ညာ လက်မထိပ်နှစ်ဖက်ကို သုံးပြီး လူတစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျောတလျှောက်ကို အချိန် ၁၅ မိနစ်ကြာနှိပ်ပေးပါ။ အဲဒီလို နှိပ်ပေးတာကြောင့် စိုးရိမ်သောက၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတို့ကို သက်သာစေပါတယ်။ သွေးဖိအားကောင်းပြီး စိတ်ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေတဲ့အတွက် ဒီနှိပ်နယ်နည်းကို နေ့စဉ်မှန်မှန် ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ပိန်လွန်းတဲ့အတွက် ပြည့်ချင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကိုလည်း အများကြီးစားပါတယ်။ ဘယ်လောက်စာစား ဝမလာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲရှင်။ A. တချို့လူတွေက အရမ်းပိန်တယ်။ ဘယ်လောက်စာစား မဝဘူး။ အဲဒီလိုလူတွေကို အဓိကအချက်နှစ်ချက်...
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သွေးခဲအန္တရာယ်၊ နှလုံးရောဂါဖြစ်တာ၊ အရေးကြောင်းဖြစ်တာနဲ့ ကင်ဆာစတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေကို ကာကွယ်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ သင့်မီးဖိုချောင်ထဲက အစာတွေကို မေ့မထားသင့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး – သွေးခဲဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေနိုင် ခရမ်းချဉ်သီးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် လိုင်ကိုပင်းဓာတ် ပါဝင်တဲ့အတွက်...
အသားပပ်တာ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ . .
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ရာသီဥတုနည်းနည်းအေးတာနဲ့ အသားခြောက်ပြီး အသားပပ်စပြုနေပါပြီ။ ဘယ်လိုသက်သာအောင် လုပ်သင့်ပါသလဲ။ A. အသားပပ်တဲ့သူတွေက ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးတဲ့ အရေပြားထိန်း Moisturizer ကိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီး ငါးမိနစ်အတွင်း Moisturizer ကို လိမ်းသင့်ပါတယ်။...